हाम्रो सिद्धान्त हो राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी, त्यसकारण गोर्खाल्याण्ड चाहियो- सीके श्रेष्ठ - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsहाम्रो सिद्धान्त हो राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी, त्यसकारण गोर्खाल्याण्ड चाहियो- सीके श्रेष्ठ
July 23, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, संवाद 0
दार्जीलिङमा महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि अलग राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग उत्कर्षमा छ। खासगरी माध्यमिक शिक्षामा बङ्गाली भाषा अनिवार्य गर्न खोज्ने बङ्गाल सरकारको निर्णयको विरोधवाट सुरू भएको आन्दोलन यतिबेला छुट्टै राज्यको मागमा केन्द्रित छ। यसको पृष्ठभूमि र सम्भावनाबारे कुराकानी गरिएको छ– गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक सीके श्रेष्ठसँग। उनी नेपालीभाषी भारतीय (गोर्खा) हरुको छाता सङ्गठन भारतीय गोर्खा परिसङ्घमा सन् २००६ देखि चार वर्ष ‘वर्किङ प्रेसिडेन्ट’ रहिसकेका छन्। प्रस्तुत छ, जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनकै सेरोफेरोमा पर्वत पोर्तेल–ले श्रेष्ठसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
देख्दाखेरी दार्जीलिङकेन्द्रित आन्दोलन जस्तो देखिए पनि यसको मूल मुद्दाचाहिं राष्ट्रिय नै हो। दार्जीलिङ आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ हो। यो आन्दोलनको भूकम्पले अहिले सिंगो भारतलाई नै हल्लाइरहेको छ। विदेशमा पनि चर्चा भइरहेछ। दार्जीलिङ बढी प्रभावित भएकोचाहिं इपिसेन्टर भएर मात्रै हो। त्यसैले यसको महत्त्व बढेको हो। गोर्खाल्यान्डको रोग भारतभरि फैलिएको छ। मुख्य रोग भनेको राष्ट्रिय पहिचानको सङ्कट नै हो। भारतमा रहेको गोर्खाहरूको सुरक्षा र पहिचानमा यो आन्दोलन केन्द्रित छ।
सीमा हुँदैन आन्दोलनको। त्यो राष्ट्रव्यापी स्वरूप र राष्ट्रिय महत्त्वमा निर्भर हुन्छ। देशले गोर्खा जातिलाई न्याय दिनुपर्ने कुरा यसमा जोडिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व सधैं दार्जीलिङको हातमा छ। नेतृत्वकर्ता दार्जीलिङका लोकल पार्टी भएकाले मुद्दा राष्ट्रिय भए पनि भोट, क्याडरलगायत समस्याले उनीहरू क्षेत्रीय पोका–पत्यौरामा अल्झिएका छन्। क्षेत्रीय पार्टीहरूको तुष्टीकरणले राष्ट्रियस्तरको मागलाई अड्काउन सकिन्छ होला भनेर बेलाबेलामा ‘प्याकेज’ दिइरहेको छ राज्य र केन्द्रले। ससाना स्वशासित आधाउधी क्षमताका इकाइ बङ्गालकै अधीनमा दिएर झारा टार्ने, भुल्याउने प्रयास भइरहेको छ। दलहरू पनि गोर्खाल्यान्ड कहिले–कहिले, यही भए पनि थापौं भनेर जनतालाई पनि थुम्थुम्याउने प्रवृत्ति सुवास घिसिङको समयदेखि नै भएको हो। त्यही कारण यो आन्दोलन यसरी तन्किँदै गएको हो।
आन्दोलन शूरु भएको महिना दिन नाघिसक्यो, उपलब्धि हासिल भएको छैन, यसको कुनै विकल्प देख्नुहुन्न?
महिनौं दिनदेखि जनता आन्दोलित छन्। भोकभोकै मर्न तयार छौं तर गोर्खाल्यान्ड बनाएरै छाड्छौं भनेर जनता जागिरहेका छन्। निर्णायक आन्दोलन गरौँ, पटुका कसेर बस्छौं भनेका छन्। जनताको यो इमानदारी र प्रतिबद्धतालाई सलाम गर्नैपर्छ। तर, समाधानको बाटो बन्द, हड्ताल र तोडफोड होइन। समाधान त केन्द्रमै छ। केन्द्र भनेको मान्छे होइन, व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई मान्छेले चलाएको छ। ती मान्छे को हुन् त, जसले यस्तो मुद्दामा निर्णय दिन सक्छन्? ती मान्छेहरूको पहिचान गर्न जरुरी छ।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको विचार सुन्दा उनीहरू अझै जमिनमै छन् जस्तो लाग्छ। तर, दार्जीलिङमा जति चिच्याए पनि, जति नै मान्छे मरे पनि केन्द्रले सुन्नेवाला देखिँदैन। अन्तिम निर्णायक लडाइँ पुलिसको ‘ब्यारिकेड’ मा हुँदैन, टेबलमै गर्नुपर्छ। बैठकमा के भन्ने, मुद्दा के हो, ‘कन्टेन्ट’ के, गोर्खालाई अलग राज्य किन दिनुपर्ने भन्ने विषयमा ‘रिसर्च’ सहितको कुरा गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा अलि कम काम भइरहेको छ। केन्द्र सरकारलाई माग जायज रहेछ भन्ने बनाउन हामीले कठोर अभ्यास गरेकै छैनौं। त्यसबिना गोर्खाल्यान्डको माग पूरा हुने सङ्केत मचाहिं देख्दिनँ।
यसपटक दार्जीलिङका दलहरू साझा मुद्दामा एकमत देखिएका छन्, यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
जनता तात्तिएको छ। मिल्नुपर्ने बाध्यता छ दलहरूलाई। बैठकमा जति नै बाझे पनि बाहिर हामी मिलेका छौं भन्न बाध्य छन्। दलहरूबीच एकअर्काप्रति विश्वास पनि बढ्दो छ, यो सकारात्मक हो। अब पारम्परिक राजनीतिका पुराना गोरेटा पछ्याइरहनुपर्छ भन्ने छैन। सोझै भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) सँग कुरा गर्दा हुन्छ। केन्द्रमा भाजपाको सरकार पूर्ण बहुमतमा छ। उनीहरूले चाहेमा (छुट्टै राज्य) बन्न सक्छ। भाजपाभित्र उच्च पदका गोर्खाहरू कति छन्? राज्यका अध्यक्ष, महासचिव, सांसद, विधायकहरू छन्। यस्ता ‘हेभिवेट’ गोर्खाहरूको खाका तयार गर्दा झन्डै २५–३० जना देखिन्छन्। आरएसएस र विश्व हिन्दु परिषद्लगायतमा हाम्रा मान्छे कति छन्, त्यो जमात छानेर ‘कोर टिम’ बनाई पार्टीहरूसँग ‘लबिइङ’ गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति चुनावलगत्तै हामी यो ढङ्गले अघि बढ्ने योजना छ। अनि हेर्छौं– भारतले गोर्खा जातिलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन? हामीलाई कुनै सरकार र पार्टीले होइन, भारत राष्ट्रले दिनुपर्छ। गोर्खालाई न्याय दिन देश चुकेको छ।
गोर्खाल्यान्ड हाम्रो समस्या होइन, समस्या त भारतमा हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी सङ्कट हो। त्यो हाम्रो रोग हो। त्यसको औषधिका रूपमा हाम्रा नाममा राज्य हुनुपर्छ भनेका हौं। गोर्खाल्यान्ड त्यो रोगको निदान हो। गोर्खाका नाममा राज्य हुँदो हो त डेढ करोड गोर्खाको ठाउँ, ठरठेगाना हुने भयो नि। राजनीतिक अधिकारका हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिं कुनै पनि अल्पसंख्यक जातिलाई संघीय ढाँचामा राष्ट्रिय पहिचान दिनु भनेको राष्ट्रिय शासनमा भागिदार बनाइनु हो। राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी पाएमा समस्या समाधान भइहाल्छ नि। राष्ट्रिय शासनमा भागिदारी पाउने माध्यम गोर्खाल्यान्ड नै हो।
गोर्खाल्यान्ड पाएपछि भारतीय गोर्खाहरू नेपालतिर गाभिएर जान्छन् भन्ने भ्रमपूर्ण तर्क नै यसको कारण हो। यो मूर्खता हो। हामी भारतीय हौं। हामीमाथि ‘मेड इन नेपाल’ को स्ट्याम्प लागेको छ, त्यो मेटाएर ‘मेड इन इन्डिया’ को छाप लगाउँ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। त्यस्तो जाति कसरी नेपालमा गाभिन्छ हौ? यो कल्पनाभन्दा बाहिरको असम्भव कुरा हो। ‘नदिने बराजुले आइतबार बार्छिन्’ भने जस्तो मात्रै हो यो। यसमा कुनै दम छैन। सत्यता छैन। मिडियाहरूले पनि यस्तै भ्रमपूर्ण प्रचार गरिरहेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ।
हामी भारतीय हुन पाएनौं भनेर तड्पिरहेका छौं। यसकारण हामी भारतीय हुन चाहन्छौं, किनकि हामीले निर्माण गरेका हौं भारतलाई। गान्धी र सुवासचन्द्र बोसहरूको अभियानमा हामी सहभागी छौं। यो देशका लागि ज्यान आहूति दिएका छौँ। यहाँ अरू जातिको जति हक छ, हाम्रो त्यति नै छ। तर आफैंले निर्माण गरेको देशमा पाहुनाजस्तो भएर बस्नुको पीडा हामीलाई छ। जहिल्यै विदेशीका रूपमा हेरिनुजस्तो दु:ख के हुन सक्छ?
खास सम्बन्ध छैन, ‘साइड इफेक्ट’ जस्तो मात्रै हो। खासमा भाषामा कुनै विवाद नै थिएन। केही महिनाअघि केन्द्र सरकारले त्रिभाषा फर्मुला घोषणा गर्‍यो। त्रिभाषामा पहिलो मातृभाषा, दोस्रो अङ्ग्रेजी र तेस्रो राष्ट्रिय भाषाका रूपमा हिन्दी बनाउने निर्णय गर्‍यो। बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन्– हिन्दी किन पढ्ने? त्रिभाषा फर्मुलामा तेस्रो भाषा– राज्यको भाषा पढ्नुपर्छ भनिन्। यसो हुँदा दार्जीलिङमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा पढ्नुपर्ने भयो। उनले खासमा केन्द्रलाई ‘काउन्टर’ दिन भनेको कुराले दार्जीलिङमा आगो बलिहाल्यो। ‘के निहुँ पाउँ’ भइरहेको थियो दार्जीलिङका दलहरूलाई। त्यही कारण आन्दोलन चर्कियो। भाषाकै विषय गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसँग जोडियो। यति त ठीकै थियो। ममताले फेरि बङ्गालमा बसेर बङ्गाली भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज नमान्ने भनेर धम्क्याउने प्रयत्न गरिन्। त्यसपछि कुरा झन् उग्र भइदियो। आफ्नो प्रभुत्व देखाउन ममताले दार्जीलिङमा ‘क्याबिनेट मिटिङ’ गर्ने मूर्खतापूर्ण निर्णय गरिन्। त्यसपछि आन्दोलनमा ममता र बङ्गाल सरकारविरुद्ध जनउभार बढ्यो।
अहिले दलहरूबीचको मिलाप नै ‘मिराकल’ जस्तो भएको छ। विगतमा कुकुर–बिरालाझैं बाझ्ने दलहरूको मिलाप गराउन पनि जनताको ठूलो देन छ। यस्तो अवस्था अहिलेसम्म दार्जीलिङमा आएको थाहा थिएन। यत्रा पार्टीहरू एक ठाउँमा छन्, केही समाधान निस्केला भन्ने आशामा जनता छन्। सुवास घिसिङको समयमा यस्तो अवस्था कहिल्यै आउन सकेन। उनको एकछत्र राज थियो। विपक्षीलाई जसरी पनि पाखा लगाउने उनको रणनीति हुन्थ्यो। पहिला पार्टीलाई ‘एलिमिनेट’, मानेन भने मान्छेलाई नै एलिमिनेट गर्ने उनको हिंसात्मक स्वभाव थियो।
पछिल्लो अवस्था कस्तो छ दार्जीलिङको?
आन्दोलन हो, बन्द–हड्ताल सुख पाउँछु भनेर गरेको होइन। प्रहरी दमन, छापामारी नयाँ कुरो होइन। विगतका आन्दोलनहरूमा पनि भएकै हो, यसपटक पनि भइरहेछ। बङ्गाल सरकार संविधान, नियम र कानुनअनुसार चलेको छैन। ममता बेनर्जीको निरङ्कुश शासनअन्तर्गत चलेको छ। ममताले जे बोल्छिन्, त्यही बङ्गालको अन्तिम कानुन हुन्छ। आन्दोलन दमन गर्ने बङ्गालको ‘स्ट्राटेजी’ नै हो। सरकारले नाकाबन्दी गरिरहेको छ। तर, त्यो नाकाबन्दीले हाम्रो आन्दोलनलाई फाइदै छ। संसारभरबाट सहानुभूति पाइरहेका छौं। नाकाबन्दीको विरोधमा सरकारी कार्यालय घेराउका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै छौं।
आन्दोलनकै कारण सिक्किम–बङ्गाल सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको मान्न मिल्छ?
यसअघिका आन्दोलनमा सिक्किम तटस्थ बस्दै आएको थियो। उसले विगतमा आन्दोलनका कारण बाटो सधैं बन्द हुन्छ, समाधान गरिदिनुपर्‍यो सम्म भन्थ्यो केन्द्र सरकारलाई। तर, यसपटक त कडा चिठी लेखेको छ केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई। प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) लाई हालै दिल्लीमा भेटेर आएपछि त मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्, बङ्गाल सरकारविरुद्ध र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समर्थनमा। उनले हालै ममता बेनर्जीलाई लक्षित गरेरै भने, ‘तिमीहरू चामल बन्द गराउँछौ भने हामी पनि पानी बन्द गरिदिन्छौं।’ राज्य–राज्यबीचको यो कडा द्वन्द्व हो। बङ्गालको हेपाइ सहन हामी भारतमा गाभिएका हैनौं पनि भने मुख्यमन्त्री चाम्लिङले।
सन् ’६० को दशकमा बङ्गालमा बङ्गलालाई राज्यस्तरीय भाषा बनाउने भनियो। त्यसबेला दार्जीलिङमा अहिले जसरी नै आन्दोलन चर्कियो। बङ्गालमा बंगला चलाए पनि दार्जीलिङमा चाहिं कार्यालयमा बोल्ने भाषा नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने मागसहितको आन्दोलन करिब दुई वर्षजति भयो। पछि बङ्गाल सरकार आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो। सन् ६० कै दशकमा भाषासँगै स्वशासनको माग पुन: उठ्यो। सन् १९७५ मा सिक्किम देश भारतको २२ औँ राज्यका रूपमा गाभियो। हिजोसम्मका सामान्य मान्छेहरू मन्त्री, मुख्यमन्त्री भए। यो देखेर दार्जीलिङ छक्क पर्‍यो। त्यसपछि सिक्किमको सोझो प्रभाव पर्‍यो दार्जीलिङमा। सिक्किमको विलय दार्जीलिङको राजनीतिका लागि पनि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनिदियो। छैटौं अनुसूची, स्वायत्तताजस्ता सानातिना अधिकारमै मक्ख परिरहेका हामीलाई सिक्किम विलयपछि राज्य पनि पाइने रहेछ भन्ने हेक्का भयो। तर, राज्य माग्ने साहस दार्जीलिङको नेतृत्वमा थिएन। सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङको उदयपछि मात्रै अलग राज्यको माग औपचारिक रूपमा मुखर भएको हो।
बङ्गाल ‘रेबेल स्टेट’ हो। बौद्धिकहरूको राज्य हो। सिद्धान्तमा चलेका धेरै पार्टी छन्। तसर्थ केन्द्रीय पार्टीहरूले बङ्गाललाई पराजित गरेर आफ्नो वर्चस्व बढाउन खोज्नु ‘फलामको च्युरा’ चपाउनुजस्तो हो। बङ्गालमा जम्मा ४२ सांसद छन्, जसमध्ये ४१ सांसद गोर्खाल्यान्डका विपक्षमा छन्। दार्जीलिङबाट जित्ने सांसदको हरिबिजोग हुन्छ। हालका सांसद (एसएस) अहलुवालियाको बिजोग छ। गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोलकाताका आफ्नै पार्टीका सांसद गोर्खाल्यान्डको विपक्षमा छन्। धरातलीय यथार्थ हो यो। तर, दार्जीलिङका जनता यी सब कुरा बुझ्दैनन्। उनीहरूलाई गोर्खाल्यान्ड पाउनुसँग मात्रै मतलव छ। राज्य प्राप्तिका अड्चन केके होलान् भन्ने कुरा जनस्तरमा पनि बुझ्न जरुरी छ।
अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्ड हुन नसक्नुका दुइटा बाधा छन्। पहिलो, पश्चिम बङ्गालभित्रका ४१ जना सांसद हुन्। ती सबै बङ्गाली हुन्। गोर्खाल्यान्ड नहुनमा पार्टीको हैन, जातिको बाधा छ। पहिला कङ्ग्रेसको सरकारले बाधा गर्‍यो। अनि सीपीएमको ज्योति बसुको सरकार आयो, त्यस्तै गर्‍यो। अहिले टीएमसी सरकारले गोर्खाल्यान्ड भए ‘महासंग्राम’ हुने चेतावनी दिइरहेको छ। भोलि भाजपाको सरकार आए पनि हामीले उही नियति भोग्नुपर्छ। कुनै पनि पार्टीको सरकारले गोर्खाल्यान्डका लागि ४१ जना सांसदलाई चिढ्याएर एकजना (दार्जीलिङका सांसद) लाई खुसी पार्न सक्ने देखिँदैन।
दोस्रो बाधा के छ भने गोर्खाल्यान्डको अवस्थिति ‘चिकन्स नेक’ क्षेत्रमा छ। दार्जीलिङको पश्चिममा नेपाल, उत्तरमा चीन, दक्षिणमा बङ्गलादेश र पूर्वमा भुटान जोडिएका छन्। यहाँ गोर्खाल्यान्ड दिइयो भने यो क्षेत्र कुनै पनि देशको प्रभावमा पर्न सक्छ भन्ने त्रास भारत सरकारलाई छ। अर्को, नर्थइस्टको बेल्टमा सिक्किमदेखि मिजोरमसम्मका आठवटै राज्यको रेकर्ड राम्रो छैन। राष्ट्रवादको तराजुमा तौलिएर हेर्दा आठै राज्य फेल छन्। सिक्किममा अहिलेसम्म पनि ‘हाम्रो देश फर्काइदे’ भन्ने आवाज पनि बेलाबेला उठ्ने गरेको छ। मणिपुरमा ४० भन्दा बढी सशस्त्र समूह छन्। केन्द्रको बजेटमध्ये आधा मात्रै सरकारले चलाउँछ, आधा सशस्त्र समूहलाई दिनुपर्ने हुन्छ। नागाल्यान्ड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम आदि राज्यमा भारतप्रतिको घृणा अझै तीव्र छ। त्यही बेल्टमा गोर्खाल्यान्ड राज्य माग भइरहेको छ। हामीले हाम्रो माग जायज छ भनेर माग्नु ठीकै छ। तर, दिनेले त राष्ट्र हितमा छ कि छैन, त्यो त पक्कै हेरिरहेको होला। त्यसैले यी समस्या गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको लडाइँका ठूला चुनौती हुन्।
विकल्पका रूपमा ‘युनियन टेरिटोरी’ हुन सक्ने कुरा पनि गाइँगुइँ सुन्नमा आएको छ। यस्तो क्षेत्रलाई केन्द्रले सोझो शासन गर्छ। तर, त्यो ‘डेट एक्स्पायर’ व्यवस्था हो, दार्जीलिङलाई सुहाउँदैन। गोर्खाल्यान्ड ‘प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन’ हो। बजारमा यो अप्राप्य छ। अझैसम्म औषधि प्राप्त भएकै छैन। हाम्रो प्रतिबद्धता औषधिप्रति होइन, रोग निको पार्नुमा हो। रोग निको हुन्छ भने अन्य कम्पनीको औषधि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सिद्धान्त छ, राष्ट्रिय पहिचानका लागि राष्ट्रिय शासनमा भागिदार।